Indlu ye-panoramic terrace [ibandakanya inkonzo yaselwandle]
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguDavide
Le ndlu ikwizinyuko ezimbalwa ukusuka elwandle (iimitha ezingama-450, imizuzu emi-5 ngeenyawo) kwaye ngokwenyani emaphandleni, kwindawo yabucala phakathi kwemithi yomnquma, amakhiwane kunye nezidiliya.
Yenziwe ziindawo ezi-2 ezizimeleyo:
Eyokuqala inegumbi lokulala, ikhitshi elikhulu elinokuhlalwa-igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye ne-panoramic terrace emangalisayo apho kunokwenzeka ukuba ube nesidlo sasemini esimnandi.
Eyesibini yindlu yokulala ephindwe kabini enegumbi lokuhlambela labucala.
Imiqamelo, iipillowcases kunye namagquma amatrasi abonelelwa kodwa hayi amashiti, iitawuli, okanye iimveliso zokucoca ngokubanzi.
Uya kufumana izitya kunye nayo yonke imigangatho oyifunayo yokupheka / ukutya. 40 ''umabonakude.
Akukho nkonzo ye-B&B ibonelelwayo.
4.53 ·Izimvo eziyi-15
4.53 · Izimvo eziyi-15
ICasalbordino Lido inolunye lolona lwandle lwendalo kwiAdriatic.
Ezinye izahlulo zesanti, ezinye zenziwe ngamatye; iilwandle zasimahla, kodwa kunye neendawo zokuhlambela ezininzi.
Ngandlela thile yindawo enomlingo, ephawulwa ngamanzi acwengileyo acwengileyo kunye neendunduma zendalo kunye neempawu. NgoJuni, inyanga efanelekileyo ezayo, ukungafani kweedaisies elunxwemeni kunye nemvelaphi ye-turquoise yolwandle ngumbono ophawulekayo.
SikwiStatale 16, ekwabizwa ngokuba yiStatale Adriatica. Kulunge kakhulu ukufikelela - ngaphandle kokuhlawula umrhumo - nayiphi na indawo eselunxwemeni.
Ukuya emantla ungafikelela kwiikhilomitha ezimbalwa San Vito, Lanciano, Ortona, Francavilla al mare, Pescara.
NgasemaZantsi: ePunta Aderci, eVasto, eTermoli ....
Uphawu kakhulu yi-Via Verde yaseCosta dei trabocchi, eyona ndlela ide kakhulu yomjikelezo eYurophu: i-42 km yomzila olwandle, ukusuka e-Ortona ukuya eSan Salvo. Kuyamangalisa ukukhwela ibhayisekile.
Iivenkile ezinkulu: eyona ndlu ikufutshane yi-Eurospin, iikhilomitha ezi-3 ukusuka kuthi, ngokuchanekileyo kufutshane nendlela yokuphuma yemoto. Ngaphandle koko kwidolophana yaseCasalbordino (iikhilomitha ezisi-7 ukusuka kuthi) kukho iConad, iTigre kunye nabanye.
Iivenkile ezininzi zegrosari nazo ziyafumaneka kwipromenade.
Ngaphaya kwesitrato kuthi kukho ionti yokutya.
Iindawo zokutyela-iiBara-iiPizzerias: kukho ezona zigqwesileyo kumda wolwandle, endiya kukucebisa zona buqu.
Ezinye iinkonzo: Iikhemesti ezi-2 kwidolophana - iivenkile phakathi kweCasalbordino kunye neVasto - ipaki yamanzi yaseAqualand 10 km ukuya eVasto.
Xa ndingekho emsebenzini ndibakho kwaye ndiyafumaneka xa kufuneka. Ndihlala kwisakhiwo esinye, kodwa kwindlu eyahlukileyo, ngoko ndinokunceda ngayo nantoni na.